Batman အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Sahin Raybüs '' နိုင်ငံရေး Will ၏ပဋိညာဉ်စာတမ်း '' အဘို့အလို့သူကပြောပါတယ် - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Homeတူရကီအရှေ့တောင် Anatolia ဒေသကြီး72 BatmanBatman အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Sahin Raybüs '' နိုင်ငံရေး Will ၏ပဋိညာဉ်စာတမ်း '' အဘို့အလို့သူကပြောပါတယ်
10 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 72 Batman, ခရီးဝေးရထားစနစ်များ, ရထားလမ်း, အရှေ့တောင် Anatolia ဒေသကြီး, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ 0
Batman အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Sahin နိုင်ငံရေးအလိုတော် raybus အခြေအနေများအပေါ်ကပြောပါတယ်
Batman အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Hulusi Sahin, Batman Diyarbakir ရထားလမ်းမီးရထားသံလမ်းကျနော်တို့raybüsကူးပြောင်းခံရဖို့စတင်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးမှာမိမိတို့အမြင်များကိုဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
Batman Diyarbakir ရထားလမ်းမော်တော်ယာဉ်များနှင့်လေထုညစ်ညမ်းမှုများ၏အရေအတွက်ကိုလျှော့ချမည်, နိုင်ငံသား, ထိုကုန်ကျစရိတ် recover ဖို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဘို့ငါတို့လက်မှတ်ကမ်ပိန်းကိုစတင်ရန်စဉ်raybüs enable မညျဖွစျကွောငျး, အန္တရာယ်ကင်းအစာရှောင်ခြင်းနှင့်စျေးပေါခရီးသွားအခွင့်အလမ်းများကိုစွဲချက်တင်, အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Sahin မှာပြဿနာအပေါ်မိမိတို့၏အမြင်များကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။ သူRaybü, အုပ်ချုပ်ရေးမှူးစီမံကိန်းနိုင်ငံရေးအလိုတော် Sahin နှင့်အတူအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖျောပွနေသည် တူရကီပြည်နယ်မီးရထား၏ "ဒီသမ္မတနိုင်ငံ, ထိုဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုအဖွဲ့အစည်း။ ဒါဟာပိုက်ဆံတစ်ဝန်ဆောင်မှု-oriented အဖွဲ့အစည်းဂရုစိုက်မထားဘူး။ နိုင်ငံရေးဖြစ်ပေါ်လျှင်ထိုကွောငျ့, ဤကိစ္စကိုဖြစ်နိုင်လျှင်။ ဤလုပ်ငန်းကိုတူရကီအတွက်အဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျ Batman သို့မဟုတ်သည့်အရေးမဆိုထားသောဆိုသညျကားဆက်လက်။ ဒါဟာအမှန်တကယ် Batman ဖြစ်ဖို့ရှိသည်ဘဲနေရသနည်း ကြှနျုပျတို့သညျ "အပြုသဘော၏ပုံစံအတွက်ဖုန်းခေါ်ရန်လိုအပ်ပါတယ် သူကပြောပါတယ်။ (Batmansonsöz)
နိုင်ငံရေး Will မှ BTS '' တုံ့ပြန်မှုကနေ TCDD 28 / 11 / 2014 TCDD '' နိုင်ငံရေး Will မှတုံ့ပြန်မှု: ယူနိုက်တက်ပို့ဆောင်ရေးအလုပ်သမားများထံမှ BTS အဆိုပါရထားလမ်းအပေါ်အခွင့်အရေးပုဂ္ဂလိကပိုင်နှင့်လုတဘက်၌သူတို့ချီတက်၏တူရကီတို့ကနောက်တော်သို့လိုက်သမဂ္ဂ (BTS), တူရကီပြည်နယ်မီးရထား၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှုနှင့်အတူအစည်းအဝေးတစ်ခုကျင်းပခဲ့တယ်။ KESK အတွင်းရေးမှူး Hasan မြေဆီလွှာများနှင့် BTS စီမံခန့်ခွဲမှုဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များပါဝင်သည်ဟုကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား transmit လုပ်ဖို့ TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာSüleyman Karaman နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်တောင်းဆိုနေပြီ။ ဦးစားပေးတောငျးဆိုခကျြတစျခုဖွစျသညျသောပြည်ထောင်စုဆွေးနွေးပွဲအပြီးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်တောင်းဆိုချက်တွေဟာအဖွဲ့အစည်း၏အခြားဝန်ထမ်းများမှစလှေတျတျောကြသည်မဟုတ်, "နိုင်ငံရေးအလိုတော်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်ပါသည်, ကျနော်တို့ကိုအာမခံမပေးနိုငျ" သူတို့အဖြေကိုလက်ခံရရှိကြောင်းဟုဆိုသည်။ ဇန်နဝါရီလ 1 2015 ကတည်းကအဖွဲ့အစည်းမှာအလုပ်မလုပ်ခြင်းငှါ, သမဂ္ဂများဖြင့်ကြေညာချက်တောင်းဆို ...
MHP ဥက္ကဋ္ဌ Batman ပြည်နယ်ရှိRaybüsကပြောပါတယ် 25 / 04 / 2019 MHP ဥက္ကဋ္ဌ Mehmet Batman အဆောက်အဦးအပြင် Batman raybüsကူးပြောင်းခံရဖို့သတင်းစာBatmansonsözခြင်းဖြင့်စတင်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအတွက် Diyarbakir ရထားလမ်းမီးရထားလမ်းကြောင်းမှလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအားဖြင့်ထောက်ခံမှုအားပေးတော်မူ၏။ ပိုမြန်ရထားမှာ Batman-Diyarbakir ရထားလမ်း, လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ၏ညှနျကွားပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်raybüsကျနော်တို့ kapmaya စတင်ခဲ့ရာစျေးပေါသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလိုင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရုံးခန်းထဲမှာလက်ခံရရှိသတင်းစာများလက်မှတ်ပေါင်းကျနော်တို့ပြည်နယ်မီးရထား၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှုမှကယ်နှုတ်တော်မူပါလိမ့်မယ်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအတွက်အကျိုးစီးပွားတိုးတက် Batman ပြည်နယ် MHP စီမံခန့်ခွဲမှုသည်လည်းငါတို့သတင်းစာသွားရောက်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ်ပိန်းကိုထောကျပံ့အားပေးတော်မူ၏။ ကြောင်းတွင် Batman ငါသည်သင်တို့ကိုraybüslအပေါ်ကင်ပိန်း execute ကျေးဇူးတင်လူအများ၏အကျိုးအတွက်မှဖြစ်လိမ့်မည် "လက်မှတ်ထိုးငါတို့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးထောက်ခံပါတယ်။ raybüsl Batman-Diyarbakir ရထားလမ်းမော်တော်ယာဉ်အသွားအလာ, Batman လျှော့ချပါလိမ့်မည် ...
Raybüsဖွငျ့စေ့ဆျော Batman-Diyarbakir Malatya ဘို့စီစဉ်ထား 02 / 05 / 2019 သတင်းစာBatmansonsöz Batman နှင့် Diyarbakir ကစီစဉ်လက်မှတ်ကမ်ပိန်းရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုရထားလမ်းဝယ်လိုအားများကျယ်ပြန့်အကြောင်းကိုအများပြည်သူသတင်းအချက်အလက်ထဲမှာရောက်ရှိခဲ့ပြီးပြီးနောက်။ စွပ်စွဲဤစီမံကိန်း၏ရလဒ်တရားစွဲဆိုဖို့စီစဉ်သည့် Batman-Diyarbakir ပြည်နယ်များပေမယ်raybüsခေါ်ဆောင်သွား Malatya မှပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရသည်။ RAYBÜSအတွက် Batman နှင့် DIYARBAKIR, 15 တထောင်ရထားလမ်းအသုံးပြုသောပျမ်းမျှလူဦးနေ့ရက်တိုင်းDiyarbakır-Batman နှင့်တည်ဆဲမီးရထားလိုင်း, ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေး၏တက်ကြွသောပုံစံကိုကျနော်တို့raybüs၏ပြောင်းလဲခြင်းအဆိုပြုချင်ပါတယ်။ Batman-Diyarbakir နှင့်လေထုညစ်ညမ်းမှုလုံခြုံမြန်ဆန်ခြင်းနှင့်စျေးပေါခရီးသွားအခွင့်အလမ်းများကိုကျနော်တို့raybüsမှစတင်ခဲ့ကြောင်းလက်မှတ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးထောကျပံ့ပေးလာခဲ့သည်, လမ်းအပေါ်မော်တော်ယာဉ်များ၏အရေအတွက်ကိုလျှော့ချမည်ဖြစ်သည်။ Karabük-Zonguldak, လမ်းဆုံလမ်းခွ-တုရုမြို့ Kars-Akyaka သည်, Malatya-Elazığအကြားထူထောင်လိုင်းraybüs ...
Giresun အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအလီ Sahin အီတလီကုမ္ပဏီမှကန်ထရိုက် cable ကိုကားတစ်စီးစီမံကိန်းကိုအပ် 04 / 04 / 2012 Giresun အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Dursun လီ Sahin, Giresun Castle စီစဉ်ထားကေဘယ်လ်ကားစီမံကိန်းကိုဟေလသလူနှင့်အီတလီတော်တော်ပျင်းရိသောလူမျိုးဖြစ်ကြ၏ "ကြောင့်အီတလီကုမ္ပဏီ၏ခွင့်ပြုချက်မှနှောင့်နှေးခဲ့ပါသည်သတ်မှတ်ခြင်းအားဖြင့်ပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ကြောင်းတူရကီနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံနဲ့တူတာမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ထိုင်ရှိရာကနေတူရိယာကစားရန်ကစားရန်လည်းသွန်းလောင်းပေါ် SIP ရန်။ ငါသည်ဤကုမ္ပဏီနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရပ်တန့်ပါ "ဟုသူကဆိုသည်။ Giresun ၏ပြည်နယ်ညီလာခံ Dursun အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့အစည်းအဝေးခန်းမအစည်းအဝေးအလီ Sahin ပါဝင်ခုနှစ်တွင်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောလေ့လာမှုများမြို့တော်ရဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းအလားအလာအကဲဖြတ်ဖို့ဖျော, Giresun Castle စီစဉ်ထားကေဘယ်လ်ကားချမှတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်. မိန့်မြွက်တော်မူ၏။ အဆိုပါကေဘယ်လ်ကားစီမံကိန်းကို2လအုပ်ချုပ်ရေးမှူး Sahin ကြောင်းဖော်ပြထားကိုင်တွယ်ရန်ရှိပြီးသဘောတူညီချက်သူတို့နထေိုငျအီတလီကုမ္ပဏီကိုဒုက္ခနှင့်ဖွဲ့ကပြောသည်။ ...
Giresun အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Sahin သူကေဘယ်လ်ကြိုးကားကိုစစ်ဆင်ရေး၏အဆုံးချဉ်းကပ်ဆိုပါတယ် 05 / 07 / 2013 မြို့ဝန်အတွက် Sahin ကေဘယ်လ်ကားစစ်ဆင်ရေးနောက်ဆုံးချဉ်းကပ်ဆိုပါတယ် Giresun အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဒီ process'm နီးပါး 1,5 နှစ်ပေါင်းကြိုးစားနေ။ cable ကိုကားတစ်စီး Sahin နှင့်ပတ်သက်သောလေ့လာမှုများအတွက်အဆုံးရန်ပိုမိုနီးကပ်စွာ "ဟု The နူးညံ့သောကိုယ်ရေးရာဇဝင်တည်ဆောက်-operate-လွှဲပြောင်းမော်ဒယ်ကပြင်ဆင်ခဲ့ဟုဆိုသည်။ ဒါဟာလွယ်ကူသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ဒီယဉ်ကျေးမှုပိုင်ဆိုင်မှုဘုတ်အဖွဲ့သွားသုံးကြိမ်သွား၏။ ဒါပေမယ့်ငါဖန်ဆင်းအဆုံး၌။ ငါအရှည် 119 မီတာတစ်ကေဘယ်လ်ကြိုးကားကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ installed ပါလိမ့်မည် 1280 မီတာမြင့်သော, Gemilerçekegကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲတိုက်မျှော်လင့်ပါတယ်။ တဖန်သင်တို့ကိုငါးမိနစ်တစ်ကေဘယ်လ်ကြိုးကားထဲတွင်ပေါ်လာနိုင်တယ်။ " သူကပြောပါတယ်။
အီတလီကုမ္ပဏီထံမှ Giresun အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအလီ Sahin cable ကိုကားတစ်စီး Shrugged မှကန်ထရိုက် 04 / 04 / 2012 Giresun အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Dursun လီ Sahin, Giresun Castle စီစဉ်ထားကေဘယ်လ်ကားစီမံကိန်းကိုကြောင့်အီတလီကုမ္ပဏီ၏ခွင့်ပြုချက်မှနှောင့်နှေးခဲ့သညျကိုဖန်ဆင်း, "ဟေလသလူနှင့်အီတလီတော်တော်ပျင်းရိသောလူမျိုးဖြစ်ကြ၏။ တူရကီနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမကြိုက်ဘူးရဲ့တကယ်တော့ကပြောပါတယ်။ ပေါ်မှာကစားရန်, သူတို့ထိုင်ရှိရာကနေတူရိယာ play လိမ့်မည်သင်၏အသောက် SIP ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာကုမ္ပဏီနှင့်အတူ ငါကြိုးစားနေအရှုံးမပေး, "ဟု၎င်းကပြောသည်။ Giresun ၏ပြည်နယ်ညီလာခံ Dursun အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့အစည်းအဝေးခန်းမအစည်းအဝေးအလီ Sahin ပါဝင်ခုနှစ်တွင်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောလေ့လာမှုများမြို့တော်ရဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းအလားအလာအကဲဖြတ်ဖို့ဖျော, Giresun Castle စီစဉ်ထားကေဘယ်လ်ကားချမှတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်. မိန့်မြွက်တော်မူ၏။ အဆိုပါကေဘယ်လ်ကားစီမံကိန်းကို2လအုပ်ချုပ်ရေးမှူး Sahin ကြောင်းဖော်ပြထားကိုင်တွယ်ရန်ရှိပြီးသဘောတူညီချက်သူတို့နထေိုငျအီတလီကုမ္ပဏီကိုဒုက္ခနှင့်ဖွဲ့ကပြောသည်။ ...
Samsun အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Sahin မြန်နှုန်းရထားလုံးဝဖြစ်ရမည် 27 / 10 / 2014 Samsun အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Sahin မြန်နှုန်းရထားအားကောင်းတဲ့သူဖြစ်ရမည်: စီးပွားရေးထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာ Speaking, Samsun အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအီဘရာဟင် Sahin တှငျကငျြးပခဲ့ "Samsun အကြွင်းမဲ့အာဏာမြန်နှုန်းရထားတွေ့ဆုံရန်ထင်နေသည်ဒါဟာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အရေးပါသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်အတူတကွယူလာမှဧကန်အမှန် Samsun ရပါမည်။ " ဟု၎င်းကပြောသည်။ Samsun အတွက်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကျေးရွာများ, Samsun အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအီဘရာဟင် Sahin ကျင်းပတဲ့စီးပွားရေးထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာစကားပြောသောသူကကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွါးလိမ့်မည်ဟုဆိုသည်။ Samsun အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအီဘရာဟင် Sahin, Samsun ကပင်လယ်နက်မှ4လက်လှမ်းရှိပါတယ်သည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်, "ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကမ္ဘာ့ဖလားငါစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်ထင်တက် 15-20 ဒီတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းစဉ်းစားပိုပြီးကြား၏။ အထူးသဖြင့် e-commerce ကိုအရောင်းအပြီးသွားကြသည်တဲ့အယူအဆဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန် 360 ဘီလီယံ တစ်ဦး ...
Samsun အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Sahin, တည်းဖြတ်ရန်တူရကီ-Konya မြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားခရီးသွားလာ 15 / 04 / 2015 Samsun အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Sahin, တူရကီ-Konya မြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားခရီးသွားလာထိန်းညှိရန်: Samsun အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအီဘရာဟင် Sahin, Samsun-တူရကီမြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်းအားတူရကီ-Konya အမြင့်မြန်နှုန်းရထားလိုင်းကိုအကြောင်းကိုသတင်းထောက်များအားနှင့်အတူအကြား on-site ကိုစစ်ဆေးခြင်းခရီးစဉ်ကိုထိန်းညှိရန်။ Samsun အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအီဘရာဟင် Sahin, တူရကီ-Konya အမြင့်မြန်နှုန်းရထားလိုင်းကိုအကြောင်းကိုသတင်းထောက်များအားနှင့်အတူအကြား Samsun-တူရကီအစာရှောင်ရထားစီမံကိန်းအား on-site ကိုစစ်ဆေးခြင်းခရီးစဉ်စည်းရုံးလိမ့်မယ်။ အတူတူ Samsun, အခင်းဖြစ်ပွားရာ Samsun အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအီဘရာဟင် Sahin မှာလေ့လာပါလိမ့်မည်သည့်တူရကီ-Konya အမြင့်မြန်နှုန်းမီးရထားလိုင်းအတွက်စာနယ်ဇင်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူတူရကီ-Konya မြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားခရီးသွားလာ Samsun ၌ဤအခြေအနေတွင်ဂျာနယ်လစ်များ၏ပါဝင်မှုနှင့်အတူဖွဲ့စည်းပါလိမ့်မည်။
မြန်ရထား Samsun အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအီဘရာဟင် Sahin သည်အရေးကြီးသတင်းအချက်အလက် 05 / 08 / 2015 မြန်ရထားများအတွက်အရေးကြီးသတင်းအချက်အလက်ထံမှ Samsun အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအီဘရာဟင် Sahin: Samsun အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအီဘရာဟင် Sahin, တူရကီနှင့် Samsun အကြားအစာရှောင်ရထားစီမံကိန်းအကြောင်းအရေးပါတဲ့ကြေညာချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ Samsun အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအီဘရာဟင် Sahin, ဧကန်အမှန် Samsun မြန်နှုန်းမီးရထားမှလာသင့်ကြောင်းပြောခဲ့သည်။ Samsun အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအီဘရာဟင် Sahin, မကြာသေးမီကတူရကီ-Konya မြန်နှုန်းမြင့်ရထားများအကြားခရီးစဉ်သို့တက်ရောက်ခဲ့သူစာနယ်ဇင်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ကြောင့်မေတ္တာကို Samsun အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ Samsun တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ခရီးစဉ်သို့တက်ရောက်ခဲ့သူစာနယ်ဇင်းအဖွဲ့ဝင်များဆန့်ကျင်ရာ၌ဝေဖန်မှုများအချို့မှတုံ့ပြန်လည်း, အဖီးအီဘရာဟင် Sahin အတွက်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားစီမံကိန်းအကြောင်းစာနယ်ဇင်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ မြန်နှုန်းမြင့်သင်တန်းများအတွက် ONE အသံဖြစ်သင့် ...
Samsun-တူရကီအထက်တန်းမြန်နှုန်းရထားဖျေါပွခကျြကနေ Samsun အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအီဘရာဟင် Sahin 30 / 09 / 2015 Samsun-တူရကီအထက်တန်းမြန်နှုန်းရထားဖျေါပွခကျြကနေ Samsun အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအီဘရာဟင် Sahin: Samsun အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအီဘရာဟင် Sahin, Samsun-တူရကီမြန်နှုန်းမြင့်ရထားလိုင်းကို၏ဖြစ်ရပ်များအကြား, Samsun နှင့်တူရကီအကြားရှိအကွာအဝေး2နာရီလဲကြမည်ဟုကြေညာခဲ့သည်။ Samsun အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအီဘရာဟင် Sahin, အခမ်းအနားတည်ဆောက်မှုမှာသူ၏မိန့်ခွန်းထဲမှာ Samsun-ထူပထမဆုံးရထားလမ်းရထားလမ်းခေတ်မီစီမံကိန်းသည် Samsun-တူရကီအစာရှောင်ရထားစီမံကိန်းအာရုံကိုဆွဲငင်။ သူအခမ်းအနား Samsun အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအီဘရာဟင် Sahin မှာဖွင့်လှစ်မိန့်ခွန်းပြောကြား, Samsun-ထူရထားလမ်းစီမံကိန်းအားကုန်တင်ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးသည်နှင့်ခရီးသည်သူအသွားအလာလျော့ပါးလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ Samsun-တူရကီအထက်တန်းမြန်နှုန်းရထား DISTANCE အထိ, အီးယူဆောက်လုပ်ရေးစတင်ပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့အကြီးဆုံးထောက်ပံ့ငွေသုံးစွဲဖို့လိုင်းထဲက "အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအီဘရာဟင် Sahin မှနှစ်နာရီ DROP Samsun, Amasya ...
Batman Diyarbakir ရထားလမ်း
Batman Diyarbakir သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးraybüs
Raybüsဖွငျ့စေ့ဆျော Batman-Diyarbakir Malatya ဘို့စီစဉ်ထား
Giresun အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Sahin သူကေဘယ်လ်ကြိုးကားကိုစစ်ဆင်ရေး၏အဆုံးချဉ်းကပ်ဆိုပါတယ်
Samsun အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Sahin မြန်နှုန်းရထားလုံးဝဖြစ်ရမည်
Samsun အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Sahin, တည်းဖြတ်ရန်တူရကီ-Konya မြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားခရီးသွားလာ
မြန်ရထား Samsun အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအီဘရာဟင် Sahin သည်အရေးကြီးသတင်းအချက်အလက်
Samsun-တူရကီအထက်တန်းမြန်နှုန်းရထားဖျေါပွခကျြကနေ Samsun အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအီဘရာဟင် Sahin